Ibali leqela leJaquar | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / Blog / Ibali leQela likaJaquar
Ibali leQela likaJaquar
2020 / 09 / 20 uhleloBlog 8931
Xa iLate NL Mehra eqale ishishini lakhe lokulungiselela izindlu zangasese eDelhi ngo-1960, wayesazi ukuba iya kuba kukuzilolonga. Ngexesha lokungenelela, iimpompo, iitephu, kunye neevaluva bezingumzekelo kwishishini elitsha kwaye zinikezelwe njengempahla yorhwebo. Akukho mntu ulibonileyo ixabiso lezinto zangasese ezinophawu.
U-NL Mehra usungule umgaqo obizwa ngokuba yi-Essco kwaye uqalile ukumisela ixabiso lemali kuyo yonke intengiso engaqhelekanga yokulungiselela izinto zokuhlambela.
Uyakwenza imveliso ye-Essco kwiyunithi eseHaryana kwaye ayikhuthaze ngesiqinisekiso seminyaka elishumi. Yayisisikimu malunga nokungenakuthelekiswa nanto kuzo zonke ezi ziganeko njengoko abathengisi bengakhange babenoxanduva lokulungiselela izinto zokuhlambela ezingagunyaziswanga.
Ukulandela obu buchule bujolise kubathengi kwaye baxhomekeke ekusebenzeni nzima komsunguli kunye nokuzinikezela ekuphuhliseni, u-Essco wajika waba yinto eyaziwayo efumanekayo kwimarike. Ifikelele kwi-Rs 30 lakh yonyaka ngonyaka ka-1985.
Nangona kunjalo, yayikukuqala nje kwebali ukulungiselela izinto ezincinci zebhafu.
Wayengazi ukuba umseki uyakuba liQela leJaquar- iRs 3,600 yezigidi zeerandi, ethi iyalela ngaphezulu kwe-60% yesabelo sentengiso kuyo yonke indawo yokuhlambela kunye necandelo le-sanitaryware e-India.
Ithathiwe kwiindawo eziphakamileyo ngethuba lesibini nelesithathu kwishishini losapho lakwaMehra, iJaquar ngoku malunga nokufana nokufakwa kwebhafu yokuhlambela kunye neempahla zococeko eIndiya. I-CERA Sanitaryware, iParryware, kunye neHindware linani labavelisi abahluke ngokupheleleyo kweli khaya.
Ikomkhulu lehlabathi laseJaquar eManesar, eHaryana
Iminyaka yokuqala yenkqubela phambili
“Ngo-1986, kunye nabantakwethu uAjay noKrishan, ndathabatha iintambo kwishishini likatata. Simdibanisile umama wethu uJai Kaur kunye nebinzana elithi 'aqua' ukubonelela ngeJaquar kunye nokwazisa ngomzekelo wecandelo lepremiyamu yokufakelwa kwebhafu, utshilo uRajesh Mehra, uMlawuli kunye noMkhuthazi, iQela leJaquar, kudliwanondlebe olwahlukileyo neSMBStory.
Icandelo leprayimamu lezilinganisi zebhafu nalo lalinaso isabelo semingeni ethile kwicandelo. Ngenxa yoko yayiludidi olusemagqabini, uJaquar wajongana nokuchasana nabathengisi kunye nabathengi abahlukileyo ngokupheleleyo.
Ukudlula kwingxaki yabathengisi bayoyika, uJaquar uthathe isigqibo sokufikelela kumathuba ngokukhawuleza. Ukuqala, uRajesh kunye neqela lakhe baqala ukukhuthaza ukuthengiswa kweJaquar kubakhi, iinjineli, kunye nabathengi kwintengiso ngokusebenzisa imiboniso emincinci.
Inkampani ngaphezulu yenza ukuba umthengi ancede afikeleleke kubathengi. Ibonelela ngokulungiselela kwaye ibuyisele ababoneleli kubathengi, ngaloo ndlela ibenza bazithembe kwaye bathembeke malunga nomgaqo.
“Inkqubo yethu ibidlulisa umyalezo kubakhi nakubathengisi ukuba le mannequin ibikuyo ixesha elide. Beka inkululeko, ukubulawa kwabavelisi behlabathi benze ukhetho lwabo kwimakethi yaseIndiya, kwaye besisazi ukuba besingathanda ukukhusela ukholo lomthengi kunye nembono ekuthambekeni. Siye sagxininisa ekuphuculeni ubulunga, senza izinto ezithengiswayo ukuphendula iimfuno ezikhoyo ngoku, saphinda saqalisa ukufakela iibhafu eziphezulu ezihlangabezana neemfuno zehlabathi, ”ucacisa watsho uRajesh.
Enye yeemveliso ezinjalo yivelufa yokugungxula ephezulu kaJaquar, eyayisungula ngo-1987. UJaquar wazuza umfutho obaluleke kakhulu ngokusetyenziswa kweminyaka yama-90 kwaye watshintsha waba yindawo ethandwa kakhulu kuyo yonke imakethi ehleliweyo yezilinganisi zebhafu.
URajesh Mehra, uMlawuli kunye noMkhuthazi, iQela leJaquar
Ukuthinta kumacandelo amatsha
Kwiflip yemodeli yemillennium entsha, ishishini losapho laqonda ukuba enye indlela inokuba yinkosi yentengiso kukusetyenziswa kokwahlukahlukana.
“Sithathe isigqibo sokwenzela iimfuno zawo onke amacandelo ngokumisela iphothifoliyo yethu. Ke, ngo-2000, saqala ukubonelela nge-whirlpools, iipaneli zokuhlamba, iishawa, iikhabhathi zomphunga kunye neepasipathi. Ngalo lonke eli xesha linye, sangenisa ixesha lesithathu kwishishini. Siye sanikezela ekukhetheni izibane ngokuvelisa iikhandlela ngo-2001, utshilo.
Iinzame zokwahlukahlukana zaqhubeka ngokusetyenziswa kwe2009 xa uJaquar wasungula izixhobo zokufudumeza amanzi. Ngo-2010, yongeze izinto zokucoca iipotifoliyo zayo.
Ngokufanelekileyo kwesi sesibini, iJaquar Group yindlu yabavelisi kunye ne-Essco (icandelo lamaxabiso), iJaquar (icandelo leprimiyamu), iArtize (icandelo elinobunewunewu) kunye neJaquar Lighting (ukhetho olupheleleyo lokukhanyisa i-LED).
"Ngoku sinendawo yokunyathela kwizizwe ezingama-45 kuyo yonke iYurophu, Middle East, Asia-Pacific, Afrika, kunye nendawo yeSAARC; kunye neefashoni zangoku ezi-5 zokuvelisa eIndiya nenye eMzantsi Korea, ”utshilo uRajesh.
UJaquar ubanga ukuba kuveliswa izixhobo zokuhlambela ezingama-28 ezigidi minyaka le, ezinamandla okwenza i-1.25 lakh faucets mihla le.
Ngo-2020, i-10,000 ishishini elomeleleyo labasebenzi lajika iminyaka engama-60. URajesh ukholelwa kwelokuba kule minyaka mithandathu idlulileyo, bekungekho namnye umzuzwana onokuvunywa njengomenzi wotshintsho kwikamva.
Utata waqala i-Essco kwasekuqaleni, saza saqala noJaquar ukusuka ku-zero. Ixesha elingaphezulu, sihlala sigcina ukholo kuthi nakwimveliso. Sasisazi ukuba sinokwenza imfihlo yethu kunye nekamva. Sinqwenele ukubonelela ngento enye anokuthi umthengi waseIndiya ayonwabele ngokuzingca ukuba ngumnini kunye nokuyisebenzisa. Okwesibini ukubala yayikukudala iklasi ye-premium ngexesha apho kwakungekho, "utshilo.
Umpompo wearc kaJaquar
Indlela yokuthengisa kunye ne-COVID-19 ichaphazela
E-India, ishishini lithengisa ngokusetyenziswa kwamava omboniso aziwa njengeZiko lokuQhelanisa neJaquar. Zizibonelelo zokuvumela umthengi ukuba athathe izigqibo ngokubanika ifestile enye yokuthenga izinto ezininzi zokuhlamba kunye nokulungiswa.
"Ngoku sinamaziko angama-21 eIndiya, kwaye ezi ndawo zihlala kuyo yonke indawo kaJaquar, zilungile kwiipompo, isanitaryware, indawo yokuhlambela, iipakethe zokugungxula amanzi, izixhobo zokufudumeza amanzi kunye nokulayita," utshilo uRajesh, kunye noJaquar. ukusetyenziswa kwendawo yokuhlala yomthengisi e-4,000 eIndiya.
Ngokuqala kwesibetho se-COVID-19, uJaquar wazifumana ekwingxaki eyodwa.
Kwelinye icala, ingcinga yokunxibelelana kwaye ngokwenene uzive inamandla kwintengiso yaseIndiya yezilinganisi zebhafu. Ixesha elingaphezulu, likhulile laba yinxalenye yokuthenga. Ngenye indlela, abantu baya besanda ngakumbi ukunqanda indawo echukumisayo kwiindawo zikawonke-wonke - iitephu kunye neefompo ezifakiwe.
Ukumisela oku njengesiqhelo esifanelekileyo apha ukuhlala, uJaquar usungule inyathelo elaziwa njengeSensor kunye noQinisekiso, ejolise ekukhuthazeni unxibelelwano olungenakunxibelelana nolwazelelekileyo kwibhafu kunye nokukhetha kwezibane.
Olu luhlu lweemveliso lubandakanya ulwazi lwethu oluchanekileyo lobukrelekrele kunye nokwenza ngokwezifiso ukuthengiswa okukhoyo ukuphelisa ukunxibelelana ngesandla. Ezi ntengiso ziqinisekiswe ngumgangatho, nethengiweyo exhaswa yitekhnoloji inethemba lokuvumela utshintsho olungenamthungo kwindlela yokuphila engachukumisiyo kuzo zonke iindawo ezingezizo ezaseburhulumenteni nezingezozabucala, utshilo uRajesh.
Isilumko sombhobho esikrelekrele sombane
UJaquar ngoku uzama ukuvuselela imveliso ngokusebenza ngokupheleleyo. Emva kokuvulwa kwenyathelo ngamanyathelo kwimizi-mveliso yayo epapasha ukutshixa, ishishini ngoku lisebenza phakathi kwe-50% kunye ne-75% yokusebenza.
Izicwangciso zayo zokunyusa ukunika ingqalelo ekukhetheni izibane ngokusetyenziswa kwemodeli entsha yokuvelisa. Indawo yokukhanyisa yayiza kugunyaziswa kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo, nangona kunjalo yalibaziseka ngenxa yokutshixwa kwayo.
"Kananjalo siceba ukuvula iyunithi yokuvelisa isifudumezi samanzi eKundli kwezi nyanga zili-12," utshilo uRajesh.
Ukufakwa kwebhafu kunye nemarike yempahla yococeko eIndiya ihlala yahlulwe, inika abavelisi abancinci ithemba lokunyusa ubukho babo kwimarike. Nangona kunjalo, uRajesh ukholelwa ukuba imveliso kaJaquar imbalwa yemveliso kwaye iyanceda ukugcina inyathelo elinye phambi kwabachasi.
Uluhlu lwezinto esizikhethileyo ngoku sisebenzisa iklasi kunye namacandelo ajika ngqo kumandla ahlanganisanayo asinika inzuzo enoburharha. Yiyo kanye indlela esivakalelwa ngayo ukuba siyakuqhubeka phambi kwabachasi, utshilo.
Ngaba ufuna ukwenza uhambo lwakho lokuqalisa lube lula? I-YS Coaching izisa yonke ikhosi yeNkxaso-mali, indawo apho ufumana ithuba lokubeka ubuchule bakho bokubhengeza kubarhwebi abaziintloko.
Ngaphambili :: Ngaba Amacebo okucoca Faucet Ayasebenza? next: IWebhusayithi eNtsha isungulwe ngeKhitshi kunye neQumrhu lokuTshintsha iToilet eSanta Rosa CA
2022 / 01 / 20 1020